डा. गोविन्द केसीसँग अब वार्ताको सम्भावना छैन : झलनाथ खनाल – रिपोर्टर्स नेपाल
डा. गोविन्द केसीसँग अब वार्ताको सम्भावना छैन : झलनाथ खनाल
२०७५ माघ १२ गते प्रकाशित, l ११:३५
शुक्रबार संसदबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित गर्यो । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको विरोधकाबीच सरकारले विधेयक पारित गरेको हो । विधेयकमा आफूसँग भएको सम्झौता पालना नभएको भन्दै डा. गोविन्द केसी अनसन बसिरहेका छन् । अब के हुन्छ त ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर ऋषि धमलाले सत्तारुढ दल नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
संसदबाट तपाईहरुले बहुमतको बलमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नुभयो । कांग्रेसले विरोध गरिरहेको छ । अब मुडभेडतर्फ जान लाग्नुभएको हो ?
संसद नियम र विधानका आधारमा चल्छ । यो संसारभरको सर्वमान्य नियम हो । प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुवैले जोरजबरजस्ती गरेर चल्दैन । प्रतिपक्षले बहुमतलाई बलपूर्वक रोक्न खोज्नु राम्रो होइन ।
सहमति भनेको सम्झौता हो । दुई पक्षबीच भएको सम्झौतामा कतिपय कुरा तलमाथि गरेर पनि सहमतिमा पुग्न सकिन्छ । केसीसँग भएको सम्झौता शतप्रतिसत पालाना हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । सरकार भनेका पनि शतप्रतिशत नहुन सक्छ । दुवै पक्षले सम्झौताका आधारमा तलमाथि भएमा सहनुपर्छ ।
डा. केसीले त प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजिनामा माग्दै आन्दोलनको चेतावनी दिनुभएको छ । अब के हुन्छ ?
जसरी विधेयक पारित भयो त्यो संसदको प्रक्रियाअनुसार नै हो । यो अनौठो मान्नुपर्ने कुरा होइन ।
दुई तिहाई बहुकत छ भन्दैमा प्रतिपक्षलाई पेलेर जान मिल्छ त ?
हामीले विधान र विधिअनुसार विधेयक पारित भएको छ ।
चौतर्फी विरोध भएको छैन । प्रतिपक्षी दलको हैसियतले कांग्रेसले विरोध गरेको हो । अरु केही मान्छेले पनि विरोध गर्न सक्छन् । यो सामान्य विषय हो ।
कतिपटक वार्ता गर्ने ? विगतमा धेरैपटक वार्ता गरेर सहमति गरेको हो । अहिले पनि सम्झौता अनुसार नै विधेयक ल्याइएको छ । सम्झौतामा भएका कुन अक्षर, रेफ, कान्दानी र बाइमात्रा तलमाथि परेको छ ? सधैँ नयाँ नयाँ मागहरु राखेर हड्ताल र अनसन गरेर हुन्छ ? यसरी देश चलाउन खोजेर त भएन नि । केसीको अनसनसँग सरकार अब झुक्दैन । विधेयक पारित भइसक्यो, अब पुनर्विचार हुँदैन । बहुमतको सरकारलाई शाषन गर्न नदिने, विधेयक पारित गर्न नदिने नियत हामीले बुझेका छाँै ।
२०७५ माघ १२ गते सम्पादित l १३:२१
एकातिर सरकारको आलोचना, अर्कोतिर पार्टीभित्र किचलो
हरेक घटनामा संसदीय समिति बनाउन हुन्नः पूर्वप्रम खनाल
जबजको औचित्य सकियो : खनाल
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दैछन्, ओलीभन्दा म सिनियर हुँ : झलनाथ खनाल(भिडियोसहित)